Dhageyso Wareysiga Mujaahidkii Camaliyadda Istish-haadiyada Ku Daahfuray Weerarkii SYL Iyo Madaxtooyada. – Calamada.com
Dhageyso Wareysiga Mujaahidkii Camaliyadda Istish-haadiyada Ku Daahfuray Weerarkii SYL Iyo Madaxtooyada.
calamada July 17, 2018 4 min read
Duhurnimadii sabtida oo taariikhdu ku beegneyd 01-da bisha dul-Qacdah, 1439, ciidamo hubeysan oo ka tirsan guutada Istish-haadiyiinta ayaa weerar ballaaran ku qaaday xarumo isku raran ah oo ay ku jiraan xarunta madaxtooyada iyo Hotelada aadka loo ilaaliyo ee ay dagan yihiin madaxda kooxda ridada Soomaaliya.
Duullaankan ayaa ku bilowday camaliyaat Istish-haadi ah ka dibna waxaa xigay weerar toos ah oo ay Mujaahidiintu ku qaadeen goobaha ay ku yaallaan xarumaha aadka loo ilaaliyo ee magaalada Muqdisho sida Madaxtooyada iyo Hotelka SYL iyo dhismayaasha ku dhow-dhow ee ay ku shaqeeyaan hay’adaha iyo wazaaradaha kooxda ridada.
Camaliyaatka Istish-haadiga ayaa kala beegsaday Hotelka SYL iyo fariisin ay joogeen maleeshiyaatka ilaalada Madaxtooyada, ka dibna waxaa walaalaha Inqimaasiyiinta ah u suuragashay in ay isku faafiyaan halkaas, si saf-ballaaran ahna u toogtaan shaqaalihii iyo askartii ka firxayey jugta camaliyaatkii lagu daah-furay weerarka.
inqimaasiyiinta ayaa adeegsanayey bambooyin iyo hubka daran-dooriga sida ay sheegayaan dad goobjoogeyaal ah, waxaana ay dagaal adag la galeen maleeshiyaatka ilaalada ka hayey xarunta madaxtooyada iyo Hotelka SYL.
Howlgalkan waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ugu yaraan 25 ka tirsan murtadiinta oo u badnaa shaqaalaha xafiisyada murtadiinta iyo ilaalada madaxtooyada, halka dhanka kale uu howlgalku sii kordhiyey walaaca amni ee heysta kooxda ridada, soona bandhigay khilaaf qarsoonaa oo ku aadan qadiyada amni xumada.
War rasmi ah oo maanta oo Isniin ah ka soo baxay agaasimaha hay’adda sirdoonka ee kooxda ridada Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa xilka looga xayuubiyey taliye ku xigeenka 1aad iyo taliye ku xigeenka 2aad ee hay’adda amniga kooxda ridada sida lagu sheegay war qoraal ah oo uu ku saxiixnaa.
Labada taliye ee xilka laga qaaday oo lagu kala magacaabo Sareeye-Guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed iyo Gaashaanle Sare Cabdul Qaadir Maxamed Nuur ayaa iyaguna wararka soo baxaya waxay tibaaxayaan in ay gaashaanka u daruureen xil ka qaadista lagu sameeyey, waxayna iska diideen in kaligood dusha laga saaro mas’uuliyadda habacsanaanta amni ee taagan.
Howlgalkan wuxuu hal todobaad un ka dib markii sidan oo kale Mujaahidiintu ay weerar halyeeynimo oo inqimaasi ah ku qaadeen xarumaha wazaaradaha Amniga iyo arimaha gudaha ee magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu dilay ugu yaraan 34 Murtad, laguna dhaawacay tiro kale.
Howgalkaas waxaa isna xilkiisii ku waayey Cabdi Casiis Xildhibaan oo ahaa afhayeenkii wazaaradda amniga, kaas oo maalma ka dib markii xilka laga qaaday u cararay dalka Ingiriiska oo uu markii hore ka yimid.
Waziirka amniga ee kooxda ridada, Murtad Maxamed Abuukar Islow, markii ugu horeysay ee uu ka hadlay duullaanadan lagu qaaday wazaaradiisa iyo xarumaha muhiimka ah ee kooxdiisa wuxuu eedeyn kala dul dhacay dadka rayadka ah ee ay jidadka ka xirteen, noloshana ku ciriiriyeen, si ka duwan halkii uu ka canaanan lahaa kumanaan maleeshiyaatka ah ee lagu soo daadiyey wadooyinka caasimadda.
Dharbaaxooyinkii ugu dambeeyey ee ay Mujaahidiintu kala dul dhaceen murtadiinta, islamarkaana gilgilay arkaanta kooxda ridada waxaa dhiigooda ku qoray halyeeyo mujaahidiinta ah oo naftooda ku halgaaday halista iyo caqabadaha si ay cadowga Allaah u dareensiiyaan in diintu leedahay rag aanan u seexan dulmiga, kuna raali noqon dulliga iyo gumeysiga saliibiga ah ee qabsaday dhulkooda.
Maxamed Xuseen Sh. Rooble wuxuu ka mid ahaa halyeeyadii fuliyey howlgalkii barakeysnaa ee sabtidii la soo dhaafay lagu qaaday xarumaha murtadiinta ee magaalada Muqdisho.
Geesigan oo loo yaqaano Cabdi Ladhiif, ama Deeqoow Xiirane, wuxuu ahaa geesigii fuliyey camaliyadii Istish-haadiga ee lagu dhaaf-furay weerarka, wuxuuna Allaah waafajiyey in uu bartanka ka istaago fariisin ay joogeen ilaalada Madaxtooyada.
Halyeeygan oo da’diisu tahay 24 sano jir ayaa ku dhashay degmada Jilib ee wilaayada Jubooyinka, wuxuuna ka soo jeedaa beesha Jiido ee degta Koonfurta Soomaaliya.
Cabdi Ladhiif wuxuu Mujaahid muraabidh ah ku tilmaanaa sabar iyo sugnaaa, marwalibana maanka ku haya Jihaad iyo istish-haad.
Mudadii uu ku jilib xirnaa Maktabka Istish-haadiyiinta wuxuu aad ugu ta’athuri jiray walaalihiisii ka horeeyey ee ku baxay wadadan, wuxuuna Allaah weydiisan jiray sugnaan ilaa uu Janada kula kulmayo.
Asxaabtiisu waxay noo sheegeen inuu ahaa Mujaahid dhowrsoon oo akhlaaq wanaagsan, u khidmeeya walaalihiisa, kuna dadaala qiyaamu Leylka iyo soonka sunada ah ee maalmaha Isniinta iyo Khamiista.
Wuxuu ahaa mid dhageysan jiray kalimaadka iyo dardaaranada Istish-haadiyiinta, naftiisana ku canaan jiray sababaha keenay in uu ka dhib dhaco dhowr Camaliyadood, markii ay timid maalintiisana wuxuu dhaqaaqay isagoo takbiirsanaya oo bishaareysanaya, kuna faraxsan la kulanka Allaah.
Wareysi uu siiyey Idaacadda Islaamiga Andalus ka hor inta uusan dhaqaaqin ayuu walaalkeen Cabdi Ladhiif ku soo gudbiyey arimo dhowr ah oo ku dhaliyey howlgalkan istish-haadiga, kuna soo gudbiyey fariimo iyo dardaarano kala duwan oo ku wajahan dadka Muslimiinta iyo Mujaahidiinta ku taagan wadada Allaah.
Halkan Ka Dhageyso Wareysiga Istish-haadiga.
Xuquuqda Codka+Qoraalka Waa Radioandalus.
Previous: Sarkaal La Dilay Iyo Dagaal Ka Dhacay Muqdisho.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 04-11-1439 Hijri.
1 thought on “Dhageyso Wareysiga Mujaahidkii Camaliyadda Istish-haadiyada Ku Daahfuray Weerarkii SYL Iyo Madaxtooyada.”
ILAAHEEY HA NAXARIISTO MUJAAHIDKAAN ILAAHEEY DARKIIS DHIIGIISA U DAADIYEY WAANA GUULEYSAN DOONAAN INSHAALAH